Waa tuma haneeneyda ugu qanisan dunida…….? | Codka Dalka	Wednesday, June 19th, 2013	Home
Published on November 30, 2012 by codka · No Comments
Iyada oo inta badan ragga lagacta heesta ay yihiin kuwa jid dheer u soo maray in ay heerkaasi gaaraan ayaa haweenku waxa ay yihiin kuwa intaa kaduwan, waxa ayna lacagtu kusoo gashaa si fudud.
Christy Walton, oo 57-sano jir ah kana soo jeeda Mareykanka ayaa waxa ay tahay haweeneyda ugu hantida badan haweenka dunida kunool , waxaana lagacteeda lagu sheegay $25.3 billion iyada oo lasheegay in lacagtaani kasoo gashay dhaxal ay kaheshay milyineer qabay oo geeriyooday kaas oo lagu magacabi jiray John Walton.
Haweeneyda Liliane Bettencourt, oo 89-sano jirta una dhalatay faransiiska ayaa cariirsatay kaalinta labaad iyada oo ay qasnad ugu jirto $24 billion. Gabadhaan ayaa iyana waxa ay dhaxal ka aruursatay aabaheed oo ahaa ninkii aasaasay shirkada L’Oreal oo sameysa waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan
Alice Walton, oo 62-sano jir ah una dhalatay mareykanka ayaa waxa ay kujirtaa kaalinta sedaxaaad, waxaana ay lacag ahaan u heysataa $23.3 billion, haweeneydaan ayaa waxaa lacagtaani kasoo gaartay aabaheed oo lagu magacabi jiray Wal-Mart.
Georgina “Gina” Rinehart, waa 58-sano jir awaxa ayna dhalatay Australia iyada oo heysata $18 billion, haweeneyaan ayaa waxaa dhalay nin lagu magacaabi jiray Lang Hancock kaas oo lahaa warshad lagu farsameyo macdanta. Haweeneydaan ayaa waxa ay tahay shaqsiga ugu lacagta badan Australia iyo haweeneyda ugu hantida badan haweenka qaarada Aasiya.
Sida aan kagaran karno afartaan hablood ee ugu horeeya liiska haweenka ugu lacagta badn aduunyada haweenku waxa ay lacagta ku helaan dhaxal, hasa yeeshee aysan shaqo ay qabtaan lacag badan kusoo gelin.